Mogadishu Journal » Maguire waxa uu ku ciyaari karaa heerka ugu sareeya, Southgate waxa uu ku adkaystay ka hor kulanka Ivory Coast
Tababaraha England Gareth Southgate ayaa ku celiyay in daafaca Harry Maguire uu haysto waxa ay ku qaadanayso in uu u ciyaaro “heerka ugu sarreeya” inkasta oo uu xiddiga Man United qaab ciyaareed liita ku jiro.
Maguire waxa uu ahaa bedel aan la isticmaalin oo uu ku soo galay saddexda libaax ciyaartii saaxiibtinimo ee sabtidii ay 2-1 kaga badiyeen Switzerland garoonka Wembley, laakiin waxa laga yaabaa inuu ku soo laabto kooxda oo ay wajahaan Ivory Coast talaadada.
Conor Coady, Ben White, iyo Marc Guehi markii ugu horeysay ayaa ku soo bilowday iyadoo England ay seddex jeer soo laabatay guushii soo laabashada ahayd ee Switzerland, iyadoo Maguire uu kasbaday dhaleeceyn usbuucyadii la soo dhaafay doorkii uu ku lahaa ololaha liita ee Red Devils.
Inkastoo uu qiray in Maguire uu ku jiro "waqti adag" kooxdiisa, Southgate wuxuu dib u xaqiijiyay inuu aaminsan yahay tayada 29-jirka.
Iyadoo saaxiibada kooxda Maguire ee Marcus Rashford iyo Jadon Sancho laga saaray xisbiga Three Lions ciyaarihii caalamiga ahaa ee March, Southgate ayaa sidoo kale iftiimiyay qoto dheer ee ay England ku leedahay aagagga hore ee weerarka.
"Marka la eego xulashada, had iyo jeer waa iskudhac adag, sababtoo ah waxaan helnay ciyaartoy aan ognahay inay si fiican u soo bandhigeen shaadhka England," Southgate ayaa sidaas yidhi. “[Laakiin] waa in la sameeyaa xoogaa baaritaan ah oo ku saabsan sida ay dadku ugu ciyaaraan kooxahooda.
“Qof walba waxa uu leeyahay aragti ku aadan cidda ay tahay ama ay tahay in aan doorano, dhamaadka waxaan u baahanahay ciyaartoyda ugu fiican ee suurtogalka ah, iyagoo ku ciyaaraya heerkooda ugu wanaagsan, si aan u helno fursad aan ku guuleysan karno.
“Isaga [Maguire] waxa uu ina gaadhsiiyay semi-finalka koobka aduunka iyo finalka koobka qaramada yurub, marka shaki kuma jiro in uu awood u leeyahay in uu ka ciyaaro heerka ugu sareeya.
“Kooxda [United] waxay ku jirtaa waqti adag, waxaana jiri kara sababo badan oo taas sabab u ah.
"Taasi macnaheedu maaha in ciyaartoydu ay faqri noqon karaan dhowr sano oo ay weli heli karaan jidkooda, [laakiin] waxay sidoo kale ku xiran tahay tartanka boosaska, waxaan ka tagnay ciyaartoy hore oo aan qaab ciyaareed fiican ku jirin. , laakiin waxaa jira bedelka ciyaartoydaas oo khibrad u leh."
Dhanka kale, Southgate ayaan daaha ka qaadin in kabtan Harry Kane uu ku soo bilaaban doono kulanka Ivory Coast, isagoo amaanay habdhaqanka xiddiga Tottenham ka dib markii uu barbareeyay Bobby Charlton oo dhaliyay 49 gool seddexda libaax.
Kane ayaa hadda ku jira kaalinta labaad ee gooldhalinta abid ee England, kaliya afar gool ayuu u jiraa rikoorka Wayne Rooney ee 53 gool, laakiin Southgate ayaa ka dhawaajiyay inuu dooran karo inuu eego fursadaha kale ee uu wajahayo The Elephants.
“Hadii uu qaabkiisa heli lahaa waxa uu ciyaari lahaa 90-daqiiqo kulan walba,” ayuu hadalkiisa kusii daray tababaraha xulka England. "Taas oo ah tayada cajiibka ah ee aad leedahay, sababtoo ah haddii aad tahay kabtanka, oo aad rabto in aad joogtid xero kasta, adigoo ciyaaraya daqiiqad kasta oo kulan kasta, taasi waxay dejineysaa habka wax kasta oo kale.
Muxuu yahay dhismaha cusub ee uu xarigga ka jaray Madaxweyne Qoorqoor? (Sawirro)